Ziva chikwata Matochi
Midzi Industrial Tablet
We zvinopa-siyana vakangwara zviteshi revatema pamwe nomuzariro remitemo & technology kudhinda uye RFID / NFC ano, kusanganisira Android QR code muripo chinouraya, Pos chinouraya, Handheld chinouraya, rotari chinouraya, kushanda pakuvheneka mudziyo, MAKARALI USB, aidhinda maindasitiri PDA, maindasitiri piritsi, akangwara patrol mudziyo, uye kupa chikumbiro mhinduro uye Software kusimukira basa.
We vanotibatsira runoenzanirana SDK, budiriro magwaro (Chinese uye Chirungu Shanduro) uye Demo mabviro romutemo. With zvipfupi API chengarava uye hwakadzama kukura magwaro, yokuvaka anogona nokusangana upi chirongwa nyore uye hwokugadzira chikwata wedu anogona kupa umwe-to-imwe rutsigiro paIndaneti.
Shenzhen ZKC Software Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna 2002, mumwe kupfuura nyanzvi akangwara zviteshi uye negadziriso mabviro nokutengesa uye mashoko webasa Provider ari IOT mumunda. Products vari zvinowanzoshandiswa mubhizimisi akangwara, akangwara basa uye zvimwe Internet zvinhu munda.
ZKC1502 Mobile akangwara mapurisa patrol mudziyo
ZKC900 Intelligent Pos chinouraya (3G)
Shenzhen ZKC Software Technology Co., Ltd rakaumbwa muna 2002, iri Shenzhen Baoan, 3 km kubva yendege, pedyo 107 National mugwagwa uye Zhoushi Road intersection.ZKC ndeimwe yenzvimbo nyanzvi mhinduro kupi bhizimisi uye mashoko basa rinobatsirwa ari njere inouraya IOT munda.
ZKC701 Intelligent chiteshi
ZKC800 Intelligent chiteshi
PDA3502 Android Handheld aidhinda PDA (3G)
PDA3501-UHF Handheld date kutora chiteshi
ZKC paakavapa Hi-Tech Enterprise
Shenzhen ZKC Software Technology co., Ltd hwakagadzwa muna 2002 uye paakavapa kuti gwaro National High-Tech Enterprise ichangopfuura, unounza rukudzo rukuru kune boka. Zvechokwadi ndicho zvinotaura zvizivikanwe uye nesimba vachida zvizere. National High-Tech Enterprises vari N ...
ZKC ichatarisira Hong Kong Electronics Fair 2017 (Spring Edition)
Exhibition ruzivo Address: Hong Kong Convention uye Exhibition Center Time: April 13-16,2017 Booth No.:3G-C27 Hong Kong Electronics Fair 2017 (Spring Edition) ichaitwa panguva April 13-16 panguva kong Convention uye Exhibition Center ( wan Chai). The pashoo vakaungana anopfuura 4100 exhi ...
© Copyright - 2010-2017: All Rights Reserved. - Power ne Globalso.com 粤ICP备14001878号-4